htikeoo: သင်္ခါရသုံးမျိုး အကျိုးပေးအတူတူ
အ၀ိဇ္ဇာသည် ဒုက္ခသစ္စာကိုသာ သူမသိတာမဟုတ်သေးဘူး၊ သမုဒယသစ္စာလဲ သူမသိဘူး။ သမုဒယသစ္စာလဲ သူမသိတော့ တဏှာ ဥပါဒါန်နဲ့ ဆုအတောင်းခိုင်းတယ်။ ဆုတောင်းတော့ ဒုတိယဘ၀ ရလာတယ်။ ဒုက္ခသစ္စာရလိုက်တာပဲ။ ပြီးတော့ နိရောဓသစ္စာလဲ သူမသိဘူး။ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ ဗြဟ္မာချမ်းသာကို နိရောဓသစ္စာ ထင်နေတာ။ စင်စစ်က ဘာသစ္စာလဲဆိုရင် ဒုက္ခသစ္စာ။ မဂ္ဂသစ္စာလဲ သူမသိဘူးတဲ့။ မဂ္ဂသစ္စာမသိတော့ ဘုံဘ၀ရောက်ကြောင်း ကုသိုလ်သင်္ခါရကို ချမ်းသာသုခရကြောင်း အစစ်ထင်ပြီးလုပ်တော့ ဘုံဘ၀ ဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြန်ရနေတယ်။ ဒါဖြင့် အ၀ိဇ္ဇာသည် သစ္စာလေးပါးလုံးကို မသိတာပဲလို့ မှတ်လိုက်။ အ၀ိဇ္ဇာက သစ္စာလေးပါးမသိတော့ ဒုက္ခသစ္စာချည်း ပြန်ရနေတယ်။
သစ္စာမသိတဲ့ အ၀ိဇ္ဇာက ဦးဆောင်ပြီး သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေးကြောင့် မုဆိုး တံငါလုပ်၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ် အသက်မွေးကြမယ်ဆိုရင် အပုညာဘိသင်္ခါရာ။ အပုည-က အကုသိုလ်၊ အဘိသင်္ခါရက ပြုပြင်တာ။ အကုသိုလ်က ပြုပြင်တော့ စုတေမနေ သေလွန်တဲ့အခါ ၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ အပါယ်ခန္ဓာငါးပါး ဒုက္ခသစ္စာ ရတယ်။ ကုသိုလ်လုပ်တော့လဲ လူနတ်ဗြဟ္မာခန္ဓာငါးပါး၊ ပုညာဘိသင်္ခါရာ၊ ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ အကုသိုလ်လုပ်တော့လဲ အပါယ်ခန္ဓာငါးပါး၊ ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ ဒီနေရာမှာ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူတာက `ကျောင်းဒကာ ဘုရားဒကာနဲ့ နွားသတ်သမား အတူတူပဲ´တဲ့။ ကျောင်းဒကာလဲ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ နောက်ဘ၀လိုချင်စိတ်နဲ့ ကုသိုလ်လုပ်တော့ ဒုက္ခသစ္စာပဲရတယ်။ နွားသတ်သမားလဲ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ အကုသိုလ်သင်္ခါရလုပ်တော့ ဒုက္ခသစ္စာပဲရတယ်။ သစ္စာမှာ သွားပြီး တူနေတာ။
သို့သော် သစ္စာအနေနဲ့တော့ မထူးပါဘူးတဲ့။ ကျောင်းဒကာ ဘုရားဒကာက လူနတ်ဗြဟ္မာ သုဂတိ ဒုက္ခသစ္စာ။ နွားသတ်သမားကတော့ အပါယ်လေးပါး ဒုဂ္ဂတိ ဒုက္ခသစ္စာ။ ဒီလိုတော့ မိုးနဲ့ မြေလို ကွာခြားပါတယ်။ သစ္စာအနေနဲ့တော့ အတူတူပါပဲ။ သစ္စာမှာတူပေမယ့် သုဂတိ ဒုဂ္ဂတိခွဲလိုက်ဦး။ သစ္စာမှာတော့ တူတယ်၊ သုဂတိ ဒုဂ္ဂတိမှာတော့ မတူဘူး။ သို့သော် ဒုက္ခသစ္စာသာရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူး။ သုဂတိဒုက္ခသစ္စာလဲ ကြိုက်စရာမရှိသလို ဒုဂ္ဂတိဒုက္ခသစ္စာလဲ ကြိုက်စရာမရှိဘူး။ ဒုက္ခသစ္စာချင်းအတူတူ ဘယ်ဒုက္ခမှ မကြိုက်နဲ့။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်`ပွေးကိုင်းစားပြီး ၀မ်းလျှော သေချင်သလား၊ သရက်သီးမျိုးကောင်းတွေ စားပြီး ၀မ်းလျှောသေချင်သလား၊ ဘယ်ဟာနဲ့ လျှောသေချင်သတုံး၊ ၀မ်းလျှော သေတာကတော့ အတူတူပဲ´။ လူ့ခန္ဓာလဲ ဒုက္ခသစ္စာ၊ တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာလဲ ဒုက္ခသစ္စာ၊ သုဂတိဝမ်းလျှောချင်လား၊ ဒုဂ္ဂတိဝမ်းလျှောချင်သလား။ မလျှောချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ ပြင်လို့ရပါတယ်တဲ့။
လူ့ဘ၀ တိရစ္ဆာန်ဘ၀ ဒုက္ခသစ္စာချင်း ဘာလို့လာတူနေရတာလဲဆိုရင် အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရ- အကြောင်းက တူနေတယ်။ အကြောင်းတူတော့ အကျိုးသစ္စာကလဲ တူပေးရတယ်။ ဒီအ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရ အကြောင်းနှစ်ခုကို နားမလည်တော့ အချို့ဘာသာတွေမှာ ထာဝရဘုရားက ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ မသိလို့ ကုသိုလ်လုပ်တော့ သုဂတိခန္ဓာရတယ်။ မသိလို့ အကုသိုလ်လုပ်တော့ ဒုဂ္ဂတိခန္ဓာရတယ်။ ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှန်သမျှ အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရချည်းပဲလို့သာ မှတ်ထားလိုက်။ အ၀ိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သင်္ခါရပြုတာပဲ။ အ၀ိဇ္ဇာက (၂)အကွက်မှာ ဒုက္ခသစ္စာလာရမှာကို မသိဘူး။ မသိတော့ ကုသိုလ်တွေပြု။ လူ့ဘ၀ နတ်ဘ၀ ဒုက္ခသစ္စာလို့သူမသိဘူး။ မသိတဲ့အတိုင်း ဒီဘုံဘ၀တွေ တောင့်တ ကုသိုလ်တွေ ပြုတော့ ပြုတဲ့အတိုင်း ရ ထားတာပဲ။ ငါလုပ်လို့ ဘာမှ အပြစ်မရှိဘူးလို့ခံယူပြီး ဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့ အကုသိုလ်တွေလုပ်တော့ (၂)အကွက်ထဲမှာ အပါယ်လေးပါး ခန္ဓာ ဒုဂ္ဂတိဒုက္ခသစ္စာ လာပေါ်ရတယ်။ မသိလို့ လုပ်တာဟူသမျှ ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပဲပေးတယ်။ ကုသိုလ်လုပ်လဲ ဒုက္ခသစ္စာ အကျိုးပေးတယ်၊ အကုသိုလ်လုပ်လဲ ဒုက္ခသစ္စာ အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ အကုသိုလ်မှ ကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ကုသိုလ်လဲ ကြောက်စရာကုသိုလ်ရှိသေးတယ်တဲ့။
ဒီကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေအပြင် ဈာန်သမာပတ်တွေ အားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလဲ ရှိသေးတယ်။ ဈာန်ကုသိုလ်တွေလုပ်တော့ (၂)အကွက်မှာ ဗြဟ္မာခန္ဓာငါးပါးလာပေါ်တယ်။ ခန္ဓာမှန်လျှင် ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ ဒီတော့ ဈာန်လမ်းဟာလဲ ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ သဘောကျ။ မသိရင်တော့ ဗြဟ္မာတွေ အလွန်ချမ်းသာတယ်ထင်နေမှာပဲ။ အကျိုးပေးတော့ ဗြဟ္မာခန္ဓာ ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ ဒါကြောင့် အ၀ိဇ္ဇာပစ္စယာ အာနဉ္ဇာဘိသင်္ခါရာ ဆိုပြီး ဟောရပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် လှူတော့ တန်းတော့မယ် ကုသိုလ်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက `မလှူပါနဲ့ဦး၊ သိပြီးမှ လှူပါ´ လို့မိန့်တော်မူတာ။ ဘာသိပြီးမှ လှူရမှာလဲဆိုရင် သစ္စာသိပြီးမှ လှူရမှာပါ။ ဒုက္ခသစ္စာမှ ကျွတ်လိုလို့ လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်အကျိုးပေးတယ်။ ဒုတိယအကွက်မလာတော့ဘူး။ ကုသိုလ်လုပ်စဉ် ဒုက္ခသစ္စာကို သိပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခသစ္စာမှ ကျွတ်လို လွတ်လိုလို့ လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုရင် ဒုတိယအကွက် ဒုက္ခသစ္စာ မလာတော့ဘူး။ လှူကတည်းက ဒုက္ခသစ္စာကြောက်ပြီးလှူတာဖြစ်တော့ ဒုက္ခသစ္စာ သူမရတော့ဘူး။ ဒုက္ခသစ္စာ မရလို့ရှိရင် သုခသစ္စာကိုသာ ရတော့မယ်။ သုခသစ္စာဆိုတာ နိရောဓသစ္စာကိုပြောတာ၊ ဒုက္ခချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။
Posted by htikeoo at 2:38 PM
*~~~Happy New Year~~~*
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် CHANNEL များ
Dr. သီလာနန္ဒာဘိဝံသ (Rector) ၏ တရားစာအုပ်များ
ဒီဇင်ဘာလတွင် သီတဂူဆရာတော် မီနီဆိုးတား ကြွရောက်မည်
သာသနာရေသောက်မြစ်တို့ ခြောက်ခန်းချိန် .......
H1N1 တုပ်ကွေးနှင့် ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်
ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ အခန်း(၄)ဗုဒ္ဓ၊ ဗုဒ္ဓနှင်.လောကီလူသား
စာရေးဆရာ မောင်သာချို၏ ရသများ
"PYIDAWOO BUDDHIST CENTRE" ( KOREA)
YOUTH BUDDHISM TEAM
***သိရုံသိပေးနေပါ။ မငြိနဲ့ နော်*** M@y T 83t W ! & giving sunshine 4u from here!
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များအသင်း-၂
မေတ္တာဝါဒီ ဆရာတော်-ဘဒ္ဒန္တစန္ဒောဘာသ
ပိုင်းလော့ဆရာတော်၊ အရှင်ပုညာနန္ဒ၊ အရှင်အာဒိစ္စရံသီ တို့၏ တရားတော်များ
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် အခြေခံတရား(နားလည်လွယ်)
ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ တရားသံများ
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အွန်လိုင်း အဘိဓာန်
လောကနီတိ ( English၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာ)
အဘိဓမ္မာ နှင့်သက်ဆိုင်သော ဓမ္မမှတ်စုများ
အဘိဓမ္မပိဋက ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် စိတ်, စေတသိက်ပိုင်း
THE YANGON MEDIA GROUP
MYANMAR bulletin board
MYANMAR CELEBRITY MUSICS
*အလကားလူ* စိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့သူ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျသူတွေဟာ သင်ယူထားတဲ့ ခေတ်ပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲတတ်စေကာမူ ဘွဲ့တွေ၊ ရထူးတွေ ကြီးနေစေကာမူ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်း ချမ်းသာစေကာမူ လူတော်မဟုတ် လူကောင်းမဟုတ် စာပေလုံးမှမတတ်သူလောက်မှ အသုံးမကျ တန်ဖိုးမရှိသူ *(အလကားလူ)* သာဖြစ်တယ်။ ဦးဥတ္တမသာရ တောင်တန်းသာသနာပြု) (စိတ်ထားကောင်းဖို့ အရေးကြီးသည် စိတ်ပုပ်၊ နှုတ်ပုပ်၊ အလုပ်ပုပ်လျှင် အများမုန်း၍ ဆင်းရဲသည်။ စိတ်ဖြူ၊ နှုတ်ဖြူ၊ အလုပ်ဖြူလျှင် အများချစ်၍ ချမ်းသာသည်။ (ချမ်းမြေ့ဆရာတော်) (စိတ်ထားကောင်းဖို.က ပထမ ။မဟာဂန္ဒာရုံဆရာတော်ကြီး။)
သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (11) ပန်းကမ္ဘာ (2) ဆောင်းပါး (2) ကိုဖိုးသား (1) ကျနော်ရေးတဲ့ကဗျာ (1) တရားစာ (1) ဓမ္မစာပေများ (1) မူလဓမ္မဆရာတော် ဦးဝိဇယ (1) သံဝေဂလင်္ကာ- ရှစ်ပုဒ် (1) အလင်းစက် (1) အမေ့အိမ် (1) သြဝါဒ (1) န္နီဝိပဿနာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ (1)
*ရတနာမြတ်သုံးပါး အနက်အဓိပ္ပာယ် သိမှတ်ဖွယ်*
နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ပညာနှစ် ( 2011 )
ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီကားထဲမှ မိုနာလီဇာသည် ကိုလက်စထရောများနေသည်ဟုဆို
မြန်မာတို့ အတွက် မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုများ
ရှေးနှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်မှ မဟာမုနိ နှီးဘုရားကြီး
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတည်ထောင်ကြမယ် --- လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေ ဖွင့်ကြမယ် --- (၂)
MinITSG - မင်း ပညာဒါန
ကိုချစ်စမ်းရဲ့ Musics ဆိုက်